Multi Calculator ကိုအခမဲ့ Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » multi Calculator ကို
multi Calculator ကို APK ကို
multi Calculator ကို, Android အတွက်ထိပ်တန်း 50 အများဆုံးထောက်ခံအုကူံပ tools တွေ app ကို။ အထူး you.Multi Calculator ကိုတည်ဆောက်တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောတွက်ချက်မှု tool ကိုသာနေ့စဉ်ရိုးရှင်းသောတွက်ချက်မှုအဘို့အလွန်သင့်လျော်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအများကြီးအသုံးဝင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါရှိသည်။ ထိုသို့သောဒါအပေါ်သိပ္ပံနည်းကျရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေးများအတွက်ဂဏန်းတွက်စက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေဖော်ထုတ်မယ်များအတွက် BMI ဂဏန်းတွက်စက်နှင့်အမျှ။
ဒီဂဏန်းပေါင်းစက်ကို Download လုပ်ပါ, သင်္ချာမရှိတော့ပျင်းစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အများကြီးပိုကောင်းနှင့်ရိုးရာဂဏန်းတွက်စက်ကို အသုံးပြု. ထက်ပိုပြီးထိရောက်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အရည်အချင်းကွန်ပျူတာလက်ထောက်ဖြစ်မည်, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအခမဲ့ပါ!
√Perfectlyကို Samsung က Galaxy S8, S8 အစွန်း, S7, S7 အစွန်း, Huawei P10, LG က Nexus 5X စသည်တို့ကိုပံ့ပိုးကူညီ
√Perfectlyအန်းဒရွိုက် 7.1 ကိုထောကျပံ့
- အလွယ်တကူသင်၏အလုပ်နှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ရန်မပိုခလုတ်နှင့်တကွ, လေးရိုးရှင်းတဲ့သင်္ချာစစ်ဆင်ရေးထွက်သယ်ဆောင်နိုင်သလား
- ပွတ်ဆွဲသင်သည်ခက်ခဲပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန် trigonometric, စတုရန်းအမြစ်နှင့်အခြားသိပ္ပံနည်းကျကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးစွဲဖို့ကီးဘုတ်ပေါ်မှာ left
- အသစ်ထည့်သွင်းနေသည်ဟု BMI ဂဏန်းတွက်စက်ကိုသင်နားလည်ကူညီပေးသည်နှင့်သင့်ကျန်းမာရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်
- အ built-in floating ပြတင်းပေါက် function ကိုကမျက်နှာပြင်၏ထိပ်မှာဆက်နေရန်ခွင့်ပြု, ဒါကြောင့်တွက်ချက်မှုမရှိတော့ apps များအကြားမကြာခဏခလုတ်လိုအပ်သည်။
- သမိုင်းကြည့်ရှုဖို့ screen ပေါ်မှာအောက်ဖက်ကိုပွတ်ဆွဲပါ; သင်တို့အဘို့အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတွက်ချက်မှုအလိုအလြောကျသင်တို့အဘို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်
- ထိုထူးခြားသောပုံသေနည်း-တည်းဖြတ်ရေး function ကိုအသုံးပြုခြင်း, သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ပုံသေနည်းမဆို content တွေကိုပြုပြင်နိုင်သည်
- ကူးယူဘို့ options များများစွာနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်သင်သည်အခြား application များဖို့ဖော်မြူလာသို့မဟုတ်တွက်ချက်မှုရလဒ်တွေကိုအလွယ်တကူကူးယူနိုင်ပါတယ်
- သင်တွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအခြား application ပြောင်းရန်သောအခါ, နေဆဲသင်တို့အဘို့စစ်ဆင်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုကယ်တင်မည်
multi Calculator ကို
14.01 ကို MB
GOMO Plus အား